Ukufunda indlela enhle yokuziphatha kufana nekhampasi ezoqondisa izingane zakho ekuphileni
Kubalulekile ukuba umuntu azibekele imithetho akhetha ukuphila ngayo. Ngokwesibonelo, ingabe ulwela ukwethembeka kuzo zonke izinto? Uma kunjalo, uzofisa ukuba nezingane zakho zenze ngendlela efanayo.
Ukufundisa izingane zakho kuhlanganisa nokuzifundisa indlela enhle yokusebenzelana nabanye. Ngokwesibonelo, umuntu osebenzelana kahle nabanye ukhuthele, uneqiniso futhi uyacabangela, okuyizinto umuntu azifunda esemncane.
OKUSHIWO IBHAYIBHELI: “Qeqesha umntwana ngokwendlela emfanele; ngisho nalapho ekhula ngeke aphambuke kuyo.”—IzAga 22:6.
Njengoba sekugcwele ezobuchwepheshe, kubalulekile ukuba abantu bazibekele imithetho yendlela yokuzisebenzisa. UKaryn, ongumama uthi: “Sekulula ukuthola izinto ezingakuthonyela kokubi kumaselula. Izingane zingabuka izinto ezingcolile zibe zihleli nathi.”
OKUSHIWO IBHAYIBHELI: ‘Abantu abavuthiwe benza amandla abo okuqonda aqeqeshelwe ukuhlukanisa kokubili okulungile nokungalungile.’—Hebheru 5:14.
Kubalulekile nokucabangela abanye. Lokhu kuhlanganisa ukubonisa inhlonipho (njengokuthi “ngiyacela” nokuthi “ngiyabonga”), nokungazicabangeli wena wedwa. Lokhu akusavamile, ngoba abantu sebenaka kakhulu imishini yabo yezobuchwepheshe kunabantu.
OKUSHIWO IBHAYIBHELI: “Leyo ndlela enifuna abantu benze ngayo kini, yenzani kanjalo nani kubo.”—Luka 6:31.
Zitshele izingane zakho ukuthi ulindele ukuba ziziphathe kanjani. Ngokwesibonelo, ucwaningo lubonisa ukuthi maningi amathuba okuba intsha ingayi ocansini ingakashadi, uma ifundiswe ngokucacile ukuthi lokho akulungile.
ZAMA LOKHU: Sebenzisa izenzakalo zakamuva ukuze ufundise ingane yakho indlela yokuziphatha. Ngokwesibonelo, uma ezindabeni kubikwa ngokuhlaselwa kwabantu abathile ungase uthi: “Iyathusa indlela abanye abantu ababazonda ngayo abanye. Ucabanga ukuthi yini ebenze baba nje?”
“Kunzima kakhulu ukuba izingane zenze okulungile uma zingazi ukuthi yini elungile nengalungile.” —UBrandon.
Fundisa izingane indlela yokusebenzelana nabanye. Ngisho nezingane ezincane zingafundiswa ukuthi “ngiyacela” nokuthi “ngiyabonga,” kanye nokucabangela abanye. Incwadi i-Parenting Without Borders ithi: “Uma izingane zifunda ukuthi aziphili zodwa—ziyingxenye yomndeni, isikole, umphakathi—zizozimisela ukwenza izinto ezingeke zisize zona zodwa, kodwa ezizosiza nabanye.”
ZAMA LOKHU: Yabela izingane zakho imisebenzi okufanele ziyenze ekhaya, ukuze zifunde ukubaluleka kokusiza abanye.
“Uma izingane zakho zikujwayela ukwenza imisebenzi yasekhaya, ngeke zibe nenkinga uma sezihlala zodwa. Ukusebenza kuzobe sekusegazini.”—UTara.
Thumelela Thumelela 7: Ukufundisa